Best Decentraland mgbanwe
Best Buy price Decentraland $ 0.038667 MANA/BTC Dex-Trade
Ahịa ahia kacha mma Decentraland $ 0.041621 MANA/BTC Mercatox
A na-ahụrịrị ọkwa kacha mma Decentraland na usoro ego ego abụọ na-agbanwerịta mgbanwe. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere Decentraland na onye na-agbanyere ego crypto ọ bụla dị iche. N'ihi ya, Decentraland ọnụego mgbanwe maka ebe azụmaahịa dị n'ịntanetị dị iche. Enwere ike ịchọta ọnụego Decentraland site na nyochawa ọnụego mgbanwe nke mgbanwe ego ego ego niile ma họrọ nke kachasị mma.
Best Decentraland obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Decentraland na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Decentraland na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Elekere Decentraland obere akpa bụ nyocha nke ndị nwe ego ego. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme dị mgbagwoju anya nke echekwara ego ego. A na-ejikwa obere akpa ahụ maka ịkwụ ụgwọ, maka mbufe nke mkpụrụ ego crypto. A na-ekpebi obere akpa Crypto karịsịa site na nfe, ntụkwasị obi na nchekwa. Anyị na-ahọrọ ọnụego mgbanwe kacha mma na azụmaahịa niile maka ịzụrụ na ire nke crypto Decentraland maka taa na mgbanwe niile n'ụwa.
Ụlọ ahịa Decentraland kacha mma
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe e nwere ọnụahịa zụrụ nke Decentraland, mgbe ahụ ọ bara uru ịchọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe ego ego a. Decentraland ọnụego kachasị mma maka taa 28/05/2020 - gosipụtara n'ụdị tebụl nke azụmahịa azụmaahịa niile maka taa. Kachasị mma Decentraland ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa 28/05/2020 anyị gosipụtara na ebe dị iche na ibe a. Tebụl nke ọnụego kacha mma Decentraland na-enye gị ohere ịhụ ọnụahịa Decentraland dị iche iche na mgbanwe. Nwere ike iji aka gị họrọ mgbanwe nke ego ego na mgbanwe kacha mma ego ego.
BTC ETH USDT BNT UQC MXN USDC QC KRW EUR THB Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Decentraland nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Omgfin MANA/ETH $ 0.040766 $ 15 490 -
Omgfin MANA/BTC $ 0.040406 $ 13 335 -
Omgfin MANA/USDT $ 0.040064 $ 1 034 -
Omgfin MANA/UQC $ 0.039709 $ 178 -
OKEx MANA/USDT $ 0.040214 $ 8 100 490 -
OKEx MANA/BTC $ 0.040044 $ 2 838 698 -
OKEx MANA/ETH $ 0.040054 $ 1 434 050 -
Huobi Global MANA/USDT $ 0.040082 $ 217 811 -
Huobi Global MANA/BTC $ 0.040096 $ 58 404 -
Huobi Global MANA/ETH $ 0.040176 $ 32 977 -
Bitso MANA/MXN $ 0.040575 $ 54 492 -
Bitso MANA/BTC $ 0.040193 $ 5 498 -
HitBTC MANA/BTC $ 0.040945 $ 1 872 -
HitBTC MANA/USDT $ 0.040645 $ 729 -
KuCoin MANA/BTC $ 0.039455 $ 2 807 -
KuCoin MANA/ETH $ 0.0397 $ 695 -
Exrates MANA/BTC $ 0.040691 $ 633 831 -
Exrates MANA/ETH $ 0.040801 $ 94 804 -
CoinEx MANA/USDT $ 0.040152 $ 614 995 -
CoinEx MANA/BTC $ 0.040166 $ 98 759 -
Alterdice MANA/BTC $ 0.039762 $ 64 041 -
Alterdice MANA/ETH $ 0.040307 $ 10 475 -
Dex-Trade MANA/ETH $ 0.039753 - -
Dex-Trade MANA/BTC $ 0.038667 - -
Lukki Exchange MANA/BTC $ 0.040302 $ 26 011 -
Lukki Exchange MANA/ETH $ 0.041085 $ 4 015 -
OKEx Korea MANA/BTC $ 0.039167 - -
OKEx Korea MANA/USDT $ 0.039272 - -
Bitsdaq MANA/BTC $ 0.040221 $ 12 054 -
Bitsdaq MANA/ETH $ 0.040208 $ 827 -
Mercatox MANA/BTC $ 0.041621 $ 18 086 -
Mercatox MANA/ETH $ 0.039245 $ 7 149 -
MXC MANA/USDT $ 0.039798 $ 546 745 -
MXC MANA/ETH $ 0.039878 $ 404 452 -
LATOKEN MANA/ETH $ 0.040805 $ 948 -
LATOKEN MANA/BTC $ 0.040351 $ 213 -
P2PB2B MANA/BTC $ 0.040618 $ 12 417 -
P2PB2B MANA/ETH $ 0.04095 $ 1 664 -
Huobi MANA/BTC $ 0.041021 $ 90 380.89 0.029288 %
Huobi MANA/ETH $ 0.041059 $ 14 220.95 0.004608 %
Gate.io MANA/USDT $ 0.03989 $ 8 106 -
Gate.io MANA/ETH $ 0.040481 $ 239 -
Poloniex MANA/BTC $ 0.040489 $ 8 312 -
Poloniex MANA/USDT $ 0.040056 $ 3 962 -
Upbit MANA/KRW $ 0.03987 $ 633 513 -
Upbit MANA/BTC $ 0.040982 $ 71 -
Bittrex MANA/BTC $ 0.040228 $ 12 136 -
Bittrex MANA/ETH $ 0.040198 $ 309 -
DragonEX MANA/USDT $ 0.03982 $ 356 196 -
BW.com MANA/USDT $ 0.040381 $ 52 496 -
Bitfinex MANA/BTC $ 0.040958 $ 7 -
VCC Exchange MANA/BTC $ 0.041564 $ 24 096 -
Kyber Network MANA/ETH $ 0.041583 $ 15 759 -
CoinDCX MANA/BTC $ 0.040079 $ 3 422 -
WBF Exchange MANA/ETH $ 0.040064 $ 2 830 805 -
Uniswap MANA/ETH $ 0.039487 $ 5 688 -
Bibox MANA/BTC $ 0.040065 $ 7 -
Livecoin MANA/BTC $ 0.04134 $ 230 -
ZB.COM MANA/QC $ 0.038748 $ 145 -
LiteBit.eu MANA/EUR $ 0.040669 $ 1 051 -
Binance MANA/BTC $ 0.039995 $ 393 490 -
WazirX MANA/USDT $ 0.039778 $ 26 -
Bancor Network MANA/BNT $ 0.03975 $ 12 346 -
Bitkub MANA/THB $ 0.040176 $ 1 216 -
Coinbase Pro MANA/USDC $ 0.040111 $ 20 451 -
Ọnụahịa azụmaahịa kachasị maka Decentraland nwere ike ọ bụghị naanị na dollar. Ọtụtụ mgbe, ọnụahịa ịzụta maka ego ndị a ma ama nwere ike ịdị elu karịa maka ego ego ọzọ. Ulo ego egosiputa ego nke enwere ike zụta Decentraland. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke Decentraland na - ere kacha mma. Ọnụahịa kacha mma maka Decentraland nwere ike ịbụ mgbe ana-ere maka ego na-adịchaghị mma ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ.
Maka mkpụrụ ego Decentraland ka erere ndị anyị kacha egosipụta n'ọhịa "ụzọ abụọ". Ngosiputa ahia ahia kacha mma maka ire ma obu izu Decentraland egosiputara na peeji a. Edebere mgbanwe ndị a na ọnụego kacha mma a gbanwere na dollar mgbe ị na-azụ ma na-ere Decentraland gaa ego ndị ọzọ na cryptocurrenrency. Nwere ike iji nzacha nke ego dị iche iche. Ọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe crypto kacha mma.